Ukuhlaziywa okujongeyo kwe-Superdrol (i-Methasterone) yokwakha umzimba
Yonke into Superdrol (Methasterone)
1. Yintoni i-Superdrol (Methasterone)? 2. I-Superdrol dosage
3. Umjikelezo we-Superdrol 4. Iziphumo ze-Superdrol
5. Superdrol half half 6. Superdrol ukusika
7. Superdrol yokukhwabanisa 8. Superdrol inzuzo
9. Ukubuyekezwa kwe-Superdrol 10. Superdrol ukuthengiswa
11. I-Superdrol yokwakha umzimba (isishwankathelo)
1. Yintoni i-Superdrol (Methasterone)? Ingaba isebenza kanjani?
Usenokuba uvile ngako Superdrol (Methasterone) ukusuka kwiimbaleki, izixhobo zomzimba okanye nabani na othanda ukuba neembonakalo ezintle. Ukuba uye wazibuza ukuba yiyiphi i-Superdrol (i-3381-88-2), funda le nqaku kwizandla kwaye uzakuqonda umjikelezo we-Superdrol, i-Superdrol umthamo, inzuzo ye-Superdrol kunye nayo yonke into ebandakanya le steroid yemilingo.
Ewe, Superdrol (3381-88-2) eyaziwa ngokuba yi-Superdrol okanye i-methyl drostanolone yenye yeyona ndlela enamandla kakhulu ye-anabolic ne-androgenic steroid (AAS) ukuba abafaki bemizimba bangayifungela. Yayilungiswa kwi-1950 kodwa ayikhishwanga kwimarike njengesigqirha somthetho.
Nangona i-Methasteron ngokwayo isele ibe yindawo ephantsi komhlaba, i-non-17a-alkylated counterpart of Methasteron iye yasemakethe phantsi kwegama elithi Masteron. Ngesinye isikhathi emva koko, kwakukho isongezelelo sokutya esibizwa ngokuba yi-Superdrol kuba yayineMethasteron.
Kwi-2006 yacinywa yi-FDA kunye ne-2012. I-Methasteron yayivalwe ngokupheleleyo ngenxa yoko idibanisa kwizinto ezilawulwayo njengazo zonke ezinye ii-Anabolic Androgenic steroids.
Oko akuzange kwenze i-Methasteron yanyamalala kwindawo yomzimba. Kusoloko sele ithatha indawo ephezulu njengenye ye-oral steroids emlonyeni.
I-Superdrol (3381-88-2) isebenza ngendlela efanayo nezinye i-anabolic androgenic steroids. Ukwahlukana nje kuphela kukuba ukubunjwa kwalo kuhlukile kwaye kunika iziphumo ezikhawulezayo kunye neziqhamo.
Iqukethe i-hormone esebenzayo ye-steroidal ebizwa ngokuba yi-methyldrostanolone. I-dihydrotestosterone (DHT) eguqula i-drostanolone. Ukwahlukana phakathi kwe-drostanolone kunye ne-Superdrol kukuba i-drostanolone ineqela le-methyl elongezelelweyo elibekwe kwindawo yeshumi elinesixhenxe yeCarbon. Leli qela lenza ukuba iSoldrol ithathwe ngomlomo kwaye ikwazi ukunqumla isibindi sakho.
I-Superdrol ineinye iqela le-methyl elifumaneka kwisikhundla sesibini seCarbon kwaye eyenza i-anabolic steroid. Izinguqu ezincinane ezivela kwi-drostanolone zijongene nemiphumo engaphantsi kwe-androgenic kwi-Superdrol xa kuthelekiswa namanye ama-anabolic steroids. Isikhokelo esiphezulu kwi-Dianabol yokwakha izakhiwo
I-Superdrol isebenza ngokukhuthaza ukugcinwa kwe-nitrogen kunye neprotheni synthesis. Inzuzo kunye nayo kukuba xa iprotheni ephezulu ihlanganiswa, kwaye i-nitrogen igcinwe iisisundu ezininzi zomzimba zakhiwe. Ngokukhawuleza izinga le-synthesis kunye nokugcinwa, ukhawuleza uya kukhulula.
Ukusetyenziswa kwe-Superdrol kukhokelela ekufutheni kwe-oxygenation yezicubu zomzimba. Xa uqeqesho, i-microfibers yakho iyaqhekeka, kwaye ukukhula kwezihlunu kuza ngenxa yokulungisa. I-oksijeni engakumbi ithetha ukuba bahlawule ngokukhawuleza kwaye ngenxa yoko, unokuqeqesha ngokugqithiseleyo okwandisa ubungakanani bemisipha yakho.
2. I-Superdrol dosage
Xa sithetha I-Superdrol dosage, kufuneka sigcine ingqalelo ukuba iinjongo zomzimba ziyahluka kumntu kumntu. Ngethuba elinye linokufuna ukwanda, injongo yomnye inokunquma. Kuzo zonke i-Superdrol umlinganiselo we-20-30mg malunga neeveki ezine ukuya ezintandathu ukwanele ukukunika iziphumo ezijoliswe kuyo ngaphandle kokubeka impilo yakho engozini.
Uninzi lwe-Superdrol Abasebenzisi bathi ngaphambi kokukhetha umlinganiselo we-Superdrol, kufuneka ugcine ibhalansi elungileyo phakathi kweemali ze-muscle kunye nemiphumo emibi. Unokuhamba ukuya ku-40mg ukuba ufuna. Ngalolu dinga, uya kufezekisa ubuninzi beemfucuza kunye nokuqina ngaphandle kokulibala igalelo le-Superdrol. Akukufanelekanga.
Ukuba ukhetha ukuthatha i-40mg, awufanele ukuyisebenzisela ngaphezu kweeveki ezine. Emva kwesi sihlandlo, isibindi sakho siza kusebenza ngokugqithiseleyo kangangokuthi ukuba ungathathi ikhefu, unokuphelisa ukubandezeleka kwimiba yesibindi. Emva kweeveki ezine, isibindi sakho sidinga ukuyibuyisela ukuze sikwazi ukusebenza ngokuqhelekileyo.
Ukuba usebenza nge-Superdrol yedwa, unokwazi ukwahlula i-dosage ibe yincinci kwaye uthabathe yonke imihla. Ngokomzekelo, unokufumana enye kusasa, enye ngaphambi kokuba usebenze kwaye umlinganiselo wokugqibela unokulawulwa ngokuhlwa. Ngokwenza oku, ufumana imiphumo embalwa yecala ngenxa yokuba ukuthatha i-Superdrol kungabangela ukuguqulwa kwamahomoni akho.
3. Umjikelezo we-Superdrol
Ngokuqhelekileyo, umjikelezo we-Superdrol uthatha iiveki ezintandathu ukuya kweebhozo. Njengomqali, ungaqala nge-Superdrol umthamo we-10mg ngosuku ukuvavanya ngobuzwe. Xa usubonile indlela umzimba wakho uphendule ngayo, unokwandisa umlinganiselo wesantya. Umlinganiselo we-Superdrol we-20mg unokuba ngowolandelayo owathathayo. Emva kokuba uvakalelwa kukuba unamava aneleyo, ungaqala ukuthatha i-30mg ngosuku.
Kwabo banqwenela ukubeka i-Superdrol (3381-88-2) kunye nezinye i-androgenic anabolic steroids ezifana neTestosterone, ngethuba lokuqala ukusebenza lixesha elifanelekileyo. I-10mg yakwanele ukukunika inzuzo ephezulu ye-Superdrol.
Emva kokuqhuba umjikelezo we-Superdrol, kufuneka ufumane unyango lwezithuba zomjikelezo. Unokwenza i-PCT ukususela kwi-5 ukuya kweyesibhozo iveki. Inceda ekuphinda uphinde uphinde ube nempilo yequmrhu lakho kunye nokulungelelanisa amazinga akho e-hormone. Kwakhona, unokuphepha iimiphumo ezingathandekiyo ezinokuthi zivuke ngenxa yokungalingani kwama-hormone.
4. Iziphumo ze-Superdrol
I-Superdrol (i-3381-88-2) inqobile iintliziyo ezininzi ngenxa yeziphumo ezinikezayo. Ukuba uqhuba umjikelezo we-Superdrol malunga neeveki ezine ukuya ezintandathu, unokufumana i-lbs eziyishumi ze-muscle. Ukudibene nezinye i-AAS, uya kubona iziphumo ezilungileyo.
Iziphumo zeveki ze-3 zithatha i-20mg Superdrol 1 / 3 / 2019 27 / 3 / 2019
ubunzima 95.3 kg 100kg
Umlenze 104 cm 104.5 cm
Inkunzi (R) 38cm 40cm
I-Thigh (R) 65 cm 67 cm
Ibhokisi le 115cm 116cm
Amagxa 133 cm 135 cm
Isikhali esiphezulu (R) 43 cm 46 cm
Njengoko kubonakala kwitheyibhile, iziphumo ziyamangalisa emva kokuqhuba umjikelezo we-Superdrol kwiiveki ezintathu kuphela. Isilinganiso esilinganiselweyo se-20mg sisetyenzisiwe. Ukusuka kwedatha ekhoyo, uyaqonda ukuba Ukuqhawula i-Superdrol Umphumo ungcono kuninzi.
Ngaphezulu koko, kwandisa amandla ngamandla. Ukukwazi ukuphakamisa i-50lbs ngaphezulu kwisisindo oye uqeqeshwe ngayo asiyonto into esingayihoywa ngayo. Xa abantu bethetha ngeenzuzo ze-Superdrol, awuyi kuphinda uva malunga namandla kunye nobukhulu bezesayizi. Ngokubambisana noqeqesho kunye nokutya okufanelekileyo, awuyi kuze kube nzima ukufumana iinjongo zomzimba wakho.
5. Superdrol half half
I-Superdrol i-half-life rang from eight to nine hours. Ngenxa yoko, iphuma kwinkqubo yomntu ngokukhawuleza kwaye yeso sizathu sokuba kufuneke ukuba kuthathwe amayeza athile. Ngokwenza oku, unako ukugcina inqanaba lokugxininisa elizinzileyo emzimbeni.
6. Superdrol ukusika
I-Superdrol inceda ukuncibilikisa amanqatha ukuba anikezele umzimba oqhenqileyo kunye onzima. Emva kokuba izidumbu zakho zakhiwe, kuya kufuneka uzinqumle ngenxa yokuba unamafutha amaninzi ngaphantsi kwesikhumba. Ngethamsanqa, i-Superdrol iya kukunceda loo nto njengoko iyancipha amanqatha ngelixa igcinwa kwi-muscle.
7. Superdrol yokukhwabanisa
Kulabo abafuna ukubukeka bejonge, i-Superdrol yinto ekhethekileyo. Ngokukhuthaza ukugcinwa kwe-nitrogen kunye neprotheni synthesis, inikeza iziphumo ezintle. Kanye kunye nokutya okunempilo kunye neprogram yokufunda ngokugqibeleleyo, kuya kunceda ungeze kwiimisipha zakho.
8. Superdrol inzuzo
Ukuba ngumakhi womzimba ubiza ngaphezu kokutya ngokugqithiseleyo nokusebenzisa. Ngelishwa, oku akukuqinisekisile ngeziphumo onokuzikhangela. Ukusetyenziswa kwe-Superdrol! Izinzuzo ze-Superdrol zininzi kwaye zibonakala kwaye akukho nto ibizwa ngokuba ngumzalwana omkhulu kaAnadrol.
Nazi ezinye ze Superdrol inzuzo;
Ukulahleka kwezinto ezithathwa ngumzimba yi-craze entsha kwihlabathi lokwakha umzimba. Kukho iimveliso ezininzi kwiimarike ezibiza ukuba zincede kule nto kunye nabanye baqhubeka bengena ngaphakathi. Ingxaki kukuba akusiyo yonke into esebenzayo kwaye abanokukunceda ukuba ufikelele ekujoliswe kuko. Ezinye ziyakwenza ukuba ulahlekelwe isisindo ngokukhawuleza kangangokuthi ushiywe ngesikhumba soguqu okanye kungekho zihlunu.
Injongo yakho yokugqibela kufuneka ilahlekelwe ngamafutha ngokunciphisa amaninzi omzimba ngaphandle kokulahlekelwa yimisipha yakho. Xa ulahlekelwa yimisipha yakho, uya kuba yinto engathandekiyo, kwaye yonke imida yakho iyalala.
Ukuba uye wacinga ngokuphala iipounds ezongezelelweyo, u-Superdrol kufuneka afike engqondweni yakho kuqala. Enoba uzame ukutya, uqeqesho okanye zombini, unokufumanisa ukuba ufuna into eyongezelelweyo. Ngethamsanqa, i-Superdrol ikunceda unciphise ubunzima. Enye yeemveliso ezinokuthenjwa. I-Nandrolone Phenylpropionate (NPP) I-Cycle, Iziphumo, iinzuzo, Isisombululo
Inzuzo kunye nayo kukuba inikeza iziphumo zomlingo ngokukuncedisa ukunciphisa ubunzima bakho kwizinga lakho elifanelekileyo. Ekubeni unamandla okulondoloza imisipha yakho, uya kuhlala ube nomzimba okhangayo ekubeni u-Superdrol uncedo ekutshiseni ioli ecocekileyo kwaye akukho nto enye.
Akukho kugcinwa kwamanzi
Bonke abakhi bomzimba, abancinci okanye abadala, bagwetywa ngemisipha yabo, ukucacisa kunye nobukhulu. Xa umntu eneenkcazo eziphezulu zomzimba, amanqanaba azo amanqatha aphantsi kakhulu. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha inkcazo yemisipha ingancitshiswa ngenxa yokugcinwa kwamanzi.
Ezinye i-steroids ziya kukunceda ekufumaneni izihlunu ezinkulu ezibangelwa ukugcinwa kwamanzi. Ukunyaniseka, awufuni ukukhangela yonke into yokukhukhumeza ngenxa yokuba unomthamo omkhulu. Uye wagxininisa ngokutya kwakho, ukuqeqeshwa kunye nokuthatha i-steroid yakho kwaye emva koko umthamo ogqithiseleyo uyakha phantsi kwezihlunu zakho ezibunzima. Umkhuhlane ogqithisileyo akufanele ube yeso sizathu sokuba izihlunu zakho zivele zidibanise.
Iintlawulo ezinjalo ziya kupheka ngokukhawuleza xa usenziwa nge-dosage yakho. Kuphela nje okwethutyana kwaye kunokuhamba ukushiya njengoko wawukho ngaphambi kokusebenzisa i-steroid.
Into ekhethekileyo ye-Superdrol kukuba ayibangeli ukugcinwa kwamanzi. Yisizathu sokuba kutheni izihlunu zibonakalise zichanekile, kwaye i-musculature iyamangalisa. Le steroid iyafaneleka ukuthenga kuba inako ukukunika inkcazo epheleleyo eya kukufumana isikhundla sokuqala xa uhamba nantoni na ukhuphiswano.
Okwangoku uye wakuva malunga nezindlela onokwakha imisipha yakho. Ukuba uqhubeka ufuna indlela yokufezekisa imisipha emininzi, uya kufikelela ngokubanzi, kwaye yilapho ubona ukuba kukho iingcebiso ezininzi ezahlukeneyo. Abanye babo baya kukushiya bexakekile, badidekile baze baxakeke. Ewe, ndinendaba ezilungileyo kuwe:
The Impembelelo ye-Superdrol iyasebenza kakhulu xa usenza isigqibo uthenge iPowdrol powder, mhlawumbi ungayi kubukela emva. Ndiyathemba ngokuqinisekileyo ukuba ingaba ubiza ngokwemyinge okanye ungenayo imisipha, le steroid iya kukunceda ukuba wakhe umzimba onamaqatha onobukhwele.
Njengoko kuthethwe kwangaphambili umphumo we-Superdrol umtsalane ungenxa yeprotein yeprotein kunye nokugcinwa kwe-nitrogen. Zomibini zinyuka kwiinkampu, kwaye kungenxa yoko Ukwakha umzimba Iintlawulo ziya kukufumana isitifiketi kokubili kwindawo yokuzivocavoca nakwindawo yokusebenzela. Ngale nto engqondweni, awuyi kuhlala uzibuza ukuba kutheni iimisipha zakho zikhangeleka ngakumbi ngosuku.
Akukho ziphumo ze-estrogenic
Esinye seziphumo ezibi kakhulu ezibangelwa yi-steroids ziphumo ze-estrogenic. Ngokucacileyo, oku kuthetha ukuba kukho utshintsho kuphuhliso lwesondo kunye nokuzala. Akukho mntu ufuna ukuhlushwa yi-gynecomastia okanye i-boobs yamadoda xa ezama ukufumana izihlunu ezinkulu. Oku kunokukwenza ube neentloni kunye nesitokhwe esihlekayo. Le steroid iyigugu kakhulu ngenxa yokuba imiphumo ye-Superdrol ayifaki nayiphi na imiphumo ye-estrogenic.
Njengesi-steroid ye-anabolic, akuyi kufuna ukuba uthathe naluphi na olwa-estrogen kunye xa ugqiba ukuqhuba umjikelezo we-Superdrol. Ngokungafani nezinye i-steroids ezinokukushiya ngeempembelelo ze-estrogenic, iPrddrol iya kushiya amanqanaba akho e-androgen aphantsi kakhulu.
Ukwandiswa kwamandla kunye nokukhuseleka
Akukho enye i-steroid inokukunika ngeenzuzo ezininzi njengezoMethasteron. Iba umboniso ngokunyusa ukuveliswa kweeseli ezibomvu zegazi. Ngenxa yoko, uvala amanqanaba omandla kunye nokukhusela okungcono.
Ukuhamba ngokuhlolwa kwe-Superdrol, abaninzi abantu bathi banamandla emva kokusetyenziswa kwe-Superdrol. Ukubuyiselwa kunye nokunyamezela kukhuthazwa ngenxa yoko kukuvumela ukuba uqeqeshe nzima. Ukuthatha i-Superdrol i-right dosage kuyakukunceda ugwebe ukukhathala, kwaye unako ukuqeqesha ngokukhawuleza naluphi na uvalelwa ngathi. Ngaba akunjalo?
Njalo xa ndiva abantu be-bodybuilders bethetha ngokufezekisa ubungakanani kwaye kungabi namandla, ndiyinyanzela. Amandla yinto ebalulekileyo ekwakheni umzimba. Ngaphandle kokuba ufikelele, awukwazi ukuphakamisa izisindo omele uyenze. Uyabona oko ndiyithethayo ukuba ukuba ufuna ukukhudlwana kunokuba uqale uqina ngakumbi kwaye akukho ndlela ejikeleze kuyo.
Abantu abaninzi banqwenela ukuba neempawu ezibukeka kakuhle kwaye bayakhohlwa ukuba amandla ancedayo ukwenza. Ukuba ufuna ukukhangela ngamandla kwaye wenze njengalo, i-Superdrol yile steroid kuwe. Kuya kunceda izihlunu zakho zibe namandla kwaye zikhulu ngexesha elifanayo.
Ngokuqhelekileyo, abanye abantu abayi kuba nexesha lokutshatyalaliswa ngexesha elifanelekileyo. Ngokomzekelo, abanye banokuba nayo kwimashumi amabini anesithuba ngelixa elifanelekileyo elifanelekileyo lifanele libe malunga neshumi elinesithathu. Zininzi izinto ezinokubangela oku kubandakanywa nemiba engqongileyo phakathi kwabanye.
Ekubeni i-steroids idla ukulinganisa ukusebenza kweTestrosterone, ukuthatha i-Superdrol inokukunceda ekuxazululeni imiba yobushushu. Ngenxa yoko, indoda ingakhula, kwaye umzimba wayo kunye ne-sex drive iya kuphucula kakhulu.
Ukuba sisifo segazi esibonakaliswe ngumlinganiselo obomvu weeseli zegazi, i-Anemia iyayiphatha ngokusetyenziswa kwayo Superdrol. Kungenxa yokuba i-Superdrol ukwandisa inqanaba leseli legazi elibomvu emzimbeni. Akumangalisi ukuba unyango lwe-Anemia luthi lunezinye i-steroids. Qaphela ukuba unyango lwe-Anemia, i-Superdrol kufuneka ithathwe rhoqo.
I-Testosterone Yokutshintshwa Kwamayeza
Xa izinga leTesttosterone liphantsi kumzimba, i-Superdrol ingasetyenziselwa ukuphatha ukungalingani. I-Testosterone ne-estrogen ukungalingani kunokubangela iingxaki emzimbeni wakho kubandakanywa ukwanda kwamafutha omzimba phakathi kwabanye. Ngokulawulwa kweMethasteron, imiphumo ingatshintshwa ekubeni le steroid ilingisa indlela iTesttosterone esebenza ngayo.
9. Ukubuyekezwa kwe-Superdrol
UAi uthi, "Le steroid ibonakala yinto engcono kakhulu endikufumene ngayo. Ndisebenzise i-steroids emininzi emininzi, kwaye ngoku, oko kwenzelwe mna. Emva kwabanye behlulekile ukunginika iziphumo ezilungileyo, ndacinga ukuba ndikho into engcono apha. Enyanisweni, i-Superdrol iyona nto ifanelekile ukuba unenjongo yokongeza ubuninzi bomzimba. Mhlawumbi ndifanele ndibulele buyaas.com ngokuthengisa kum.
Ndiyithatha iiveki ezidlulileyo ezintandathu ngaphandle kokwenza utshintsho oluninzi kwindlela yokusebenzisa rhoqo. Iimisipha zam ngoku zikhulu kwaye zichazwe; into endicinga ukuba yayingeze kwenzeka kum. Ukhuphe ngaphandle kwam ukuba ndiyaziqhenya ngokuqeqesha sonke isifuba sam. Ukuba uthatha nayiphi enye i-steroid ngaphandle kwe-Superdrol, ngoko wenza konke okungafanelekanga. "
UBa uthi, "U-Superdrol ngumama wokubuyiselwa. Kwixesha elidlulileyo, ndandidandwe kodwa ndingekho. Ndiyisebenzise kwiiveki zintathu, kwaye ngoku ndivakalelwa ngamandla emini kwindawo yam emsebenzini (ndisebenza kwindawo yesakhiwo). Ngaphandle koko, ndidlala kunye noonyana bam ngobusuku ngaphambi kokushaya ukusebenza kwam.Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) yoKwakha
Ndiye ndafunda malunga ne-steroids eyahlukeneyo de ndihlala kwi-Superdrol ukusuka ku-buyaas kwaye konke oko ndingayithethayo kukuba ndiyabulela kukuba ekugqibeleni ndifumene imveliso engcono. O! Inkonzo yabathengi ingaphezulu nangaphezulu. Unxibelelwano lwabo luphezulu, kwaye ndifumene iphakheji yam ngaphandle kwexesha. Andikwazi ukuthetha ngokwaneleyo malunga nale ndawo kunye nale mveliso. Nguwe ewe kum. "
UBohai uthi, "Ndisebenza iminyaka engaphezu kwelishumi kwaye ndazama malunga nantoni na engena engqondweni yakho. Emva kokuqhuba umjikelezo wokubhukuda, ndihlala ndijamelene nokusika kwaye ndihlala ndihlala, ndishiywe ngobukhulu obukhulu ngaphandle kwemisipha ebonakalayo. Ndandicacile xa ndithenga le nto kodwa ndithembela phezulu Ukubuyekezwa kwe-Superdrol Ndandifunde inthanethi.
Amandla kunye nokunyamezela kwam sele sele ndiqalise ukusebenzisa le steroid. Ngeziveki ezimbalwa endizisebenzisileyo, ndiye ndaqaphela ukuba ndiye ndixhamla kakhulu kwaye ndikhulula. Nangona ndigcine ubukhulu obunokuba ndibe nalo mhla, umzimba wam umzimba uyancitshiswa ngu-3.4%. Ndijonge kwaye ndiziva ngathi ndingumntu omtsha kwaye ndijonge kwisibuko; Ndishiywe ndibuza ukuba kutheni ndingazange ndiqalise ngaphambili. Ndiya kufakazela ukuba nabani na ofuna ukusika nokugcina imizimba yabo. "
U-Ying uthi, "Ndathenga i-Superdrol kwisiphakamiso somhlobo wam umzekelo. Ndisoloko ndifuna ukwenza imodeli, kodwa andizange ndiqiniseke kakhulu ngomzimba wam. Ukuhlala emva kwedeski yam iminyaka emihlanu edlulileyo sele wongeze amafutha amaninzi emzimbeni wam owawunokuba ngumlinganiselo wesimo.
Eyona nto yam enkulu ekupheleni konyaka odlulileyo, ndingu 223. Kwiintsuku ezingamashumi amane emva kokutya okucocekileyo kwaye uqhuba umjikelezo we-Superdrol, ndihla ku-199lbs. Le steroid ixabela onke amanqaku kuquka okubangelwa yimiphumo emibi. Andiqapheli nayiphi na imiphumo ye-Superdrol ngoku, kwaye yintoni eyenza ndiyithande le mveliso ngakumbi. Umzimba wam ubuyile, kwaye ndasula nje kwaye ndaqala ukwenza oko ndiyithandayo rhoqo okuyiyo imodeli yobugcisa. I-Superdrol yokunciphisa inzuzo incede ndincede ndiphelise ekubeni nomzimba onzima nje. Siyabonga Superdrol! "
10. Superdrol ukuthengiswa
Kufika ixesha apho wonke umakhi womzimba evakalelwa ngathi ufuna into eyongeziweyo. Ukusebenzisa i-steroids yindlela eqinisekileyo yokukhawuleza ukukhula kwemisipha kunye nokulahlekelwa iipounds ezide ukuba ngaba loo njongo. Abaqeshisi bomzimba abaqeqeshiweyo abayena kuphela abantu abafanele basebenzise i-steroids, kodwa nawuphi na umqhubi we-gym oqhelekileyo ovakalelwa ngathi ufuna ukunyathela izidumbu zabo.
I-Superdrol yenye ye-steroids ethandwayo eya kukunika ibha yakho. Isidakamizwa esilawulwayo, kwaye awukwazi ukukwazi bathenge iPowdrol powder naphi na. Kwiimeko ezininzi, unokuphangwa, kwaye unokuphela kunye nomveliso ohluke ngokupheleleyo. Ukufumana izandla kwi-Superdrol umenzi womsebenzi kunokuba nzima kakhulu, kwaye ukuba ungeyinyameko ngokwaneleyo, kunokuthi kube yinkcitho yemali.
I-intanethi yindawo engcono kakhulu apho ungathengela i-Superdrol kwi-intanethi ngaphandle kokuba uhambe kuyo yonke inkqubo yokuthenga. Kuphela kufuneka ufikelele kwi-intanethi uze ubone umboneleli ongcono we-Superdrol oza kukunika iimveliso eziphezulu. Kuya kukuthintela ukuthenga imveliso engasebenzi okanye enye eyonakalisa impilo yakho.
Enye yezindlela eziphezulu zokufumana umthengi ofanelekileyo kukufumana umntu ophonononge kakuhle. Ukukhetha umntu ofumana iimpendulo ezintle kukunceda ukuxazulula ingxaki yokufuna umthengisi ogqibeleleyo we-Superdrol. Kuthetha ukuba ngoku unokwenza ingqondo yakho kuxhomekeke kwintoni abanye abantu abaye bahlangabezana nalo nomthengisi we-Superdrol.
Ukongezelela, uvumelekile ukuba uqhathanise amanani phakathi kwabathengisi abahlukeneyo ekuthuthukisweni kwekhaya lakho. Ngubani ongakuthandi ukugcina enye idola? Kodwa ke kufuneka uhlale ukhangela amaxabiso aphantsi kakhulu asebenza njengexhoba labathengi abangaboniyo. Yiya kumntu onika izinga elilinganayo elifanele umkhiqizo, kwaye akushiyi ukuphula.
Thina sisona sikhulu esingumenzi we-Superdrol onobugcisa bakho obukunikezela ngempumelelo. Zonke izixhobo kwi-Superdrol yethu ezithengiswayo zikhuselekileyo kwaye njengoko zifakwe kwiinkcazo zemveliso. Emva kokuba uqale ukuyithatha, awuyi kuze kube nzima ukufezekisa iinjongo zomzimba wakho.
Intengo yethu ye-Superdrol ingqiqweni, kwaye ifikeleleke kuwo wonke umntu kubandakanye nalawo asebhajethi - ukucwangcisa ukuthenga i-Superdrol ngobuninzi? Sineziganeko ezilungileyo kakhulu kuwe. Ukunikezelwa kwethu kunokwethenjelwa, kwaye unokulindela iphakheji yakho ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Thenga namhlanje uze ufumane i-Superdrol esemgangathweni.
Njengoko kuboniswe kweli nqaku, ukusetyenziswa kwe-Superdrol kunokukunceda ukuba uzuze isihloko seyona ndawo. Nabani oye e-Superdrol ukwakha umzimba ungatsho ngokulula iingcinezelo eziza nazo. Zininzi ngamaxesha oziva uthanda ukuyeka ngenxa yokuba ucinga ukuba awukwazi ukufikelela kwinqanaba ngaphandle kokusetyenziswa kokuphucula iziyobisi. Ngenhlanhla, i-Superdrol unokukhawulezisa inkqubo ekunike iziphumo ezinonophelo.
Ngendlela yokusebenzisa uhambo lwakho lokwakha umzimba aluyi kuphinda lugqithise; kwiiveki ezintandathu ezizayo, uya kuba nokufumana iziphumo ezibonakalayo. Xa sisetyenziselwa ukudibanisa nokutya okulungileyo kunye nokuqeqeshwa okuqinileyo, kunokukunika ukubonakala okukhangayo.
Ngaphezu koko, kuboniswe ukuba luncedo kunyango lweemeko ezithile zonyango eziqhelekileyo namhlanje. Nangona kunjalo, ukuphepha ukulimaza umzimba wakho ngaphezu kokuba unokukunceda, kufuneka uthathe ilungelo le-Superdrol. Uninzi lwawo alinakuhlala likunika iziphumo ezingcono.
Ngoxa usebenzisa i-Superdrol, kubalulekile ukuba uhlolisise ukutya kwakho ukuqinisekisa ukuba ufumene kakhulu. Ukutya amaninzi okutya okuninzi-protein kunokunceda ukukhawuleza umonakalo we-Superdrol. Kwakhona, ukunciphisa inani lama-carbs kunye nokutya okunamafutha okungcolileyo othabathayo kuya kufaka I-Superdrol yokusika iziphumo.
Ukusebenza okungaphezulu koko kuya kwenza ukuba iziphumo ze-Superdrol zibonakala zibonakala. Kuyadabukisa ukuba abanye abacebisi bemizimba bacinga ukuba ukuthatha i-Superdrol kwaye kungabikho qeqesho kuya kufumana umsebenzi. Njengokuba le steroid iya kuncedisa ekuphuculeni ukuphuhliswa komzimba, akuthethi ukuba kufuneka ufumane i-slacker kwi-gym. Inyaniso kukuba ufanele usebenze kabini ngenxa yokuba unamandla kwaye ungakwazi ukubuyela ngokukhawuleza.
Yithenge namhlanje kwaye uphishekele ukuzuza okusoloko uphuphayo.
I-Supplement yeBhayilo yeBhayibhile: Impilo kunye nokuPhepha, ngo-Will Brink, Page 302-307
IziNcediso Zempilo kwiMidlalo kunye nokuzivocavoca, ezihlelwe nguMike Greenwood, uMatewu B. Cooke, uTim Ziegenfuss, uDouglas S. Klman, uJoseph Antonio, iphepha 13
Anabolic-Androgenic Steroids, ehleliwe nguCharles D. Kochakian, iphepha le374